ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ယူရီ အသိုက်အဝန်း တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက် (Burmese) | SpeakUp Austin!
ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ယူရီ အသိုက်အဝန်း တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက် (Burmese)
ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် လုပ်သားအင်အားစုသည် ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ယူရီဖြစ်ပွားနေစဉ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်အတောအတွင်း သင်တွေ့ကြုံရသည့်အရာများအကြောင်းကို အသိုက်အဝန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ ကြားသိလိုပါသည်။ ရေးသားထားသော ဖော်ပြချက်၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း၊ နှင့် ဓာတ်ပုံများမှတစ်ဆင့် တင်ပြထားသော သင်၏ သူမတူသည့်ဇာတ်ကြောင်းများကို မှတ်သားထားရန်အတွက် ဤဝဘ်စာမျက်နှာကို ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ဇာတ်ကြောင်းကို မျှဝေပြောပြရန် ဖော်ပြပါတဘ်များပေါ်ရှိ တူးလ်များကိုသုံးပေးပါ။ သင်သည် ဇွန်လ 30 ရက်၊ 2021 နောက်ဆုံးထား၍ သင်၏တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက်ကို community@austintexas.gov ထံသို့လည်း အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ လုပ်သားအင်အားစုသည် လူသိရှင်ကြား ဖော်ပြချက်အတွက် ဗာကျူရယ် နားထောင်ခြင်းဆက်ရှင်များကို လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဤဝဘ်စာမျက်နှာနှင့် နားထောင်ခြင်းဆက်ရှင်များအတောအတွင်း မှတ်သားထားသော ဇာတ်ကြောင်းများကို အကျဉ်းချုံးထားသည့် အစီရင်ခံစာကို မြို့တော်ကောင်စီထံ ဇူလိုင်လ 30 ရက်၊ 2021 နောက်ဆုံးထား၍ တင်ပြမည်ဖြစ်ကာ လက်ခံရရှိထားသော ဇာတ်ကြောင်းမျိုးစုံကို Austin သမိုင်းကြောင်းစင်တာတွင် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ယူရီ ဖြစ်ပွားနေစဉ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်အတောအတွင်း သင် တွေ့ကြုံ သိရှိထားသည့်အရာများထံမှ ဇာတ်ကြောင်းများကို မျှဝေပေးပါ။ လူတိုင်းသည် သင်၏ပို့စ်ကို တွေ့မြင်ကာ မှတ်ချက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။ တင်ပြမှုအားလုံးကို Austin သမိုင်းကြောင်းစင်တာတွင် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင့်ဇာတ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မျှဝေခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Page last updated: 04 August 2021, 17:41
လိုင်းပေါ်တွင် အသွင်တူ ကြားနာရမည့် အစီအစဉ် တွေ့ဆုံပွဲ ရက်စွဲများ-
မေ 14၊ 2021 (6-8PM)
မေ 28၊ 2021 (6-8PM) တွေ့ဆုံပွဲကို ပယ်ဖျက်ထားသည်
ဇွန် 2၊ 2021 (10AM-12PM)
ဇွန် 11၊ 2021 (6-8PM)
ဇွန် 23၊ 2021 (6-8:30PM)
တွေ့ဆုံပွဲကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်လင့်ခ်- http://www.austintexas.gov/page/watch-atxn-live(External link).
ပါဝင်ပြောဆိုရန် လူထုဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံထံသို့ 512-974-6339 မှတဆင့်ဖြစ်စေ WinterStormTaskForce@austintexas.gov သို့ဖြစ်စေ တွေ့ဆုံပွဲမပြုလုပ်မီ တစ်ရက်၏ မွန်းတည့်ချိန်ထက်နောက်မကျစေဘဲ ဆက်သွယ်ပါ။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် ခေါ်ဆိုဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုမည့် ပါဝင်ပြောဆိုသူ၏ အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ပေးပို့စေလိုပါသည်။
ပါဝင်ပြောဆိုခွင့်ကို တောင်းဆိုပြီးသည်နှင့် အချိန်စီစဉ်ထားသည့်တွေ့ဆုံပွဲရက်တွင် ခေါ်ဆိုဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်ပြောဆိုသူများသည် တွေ့ဆုံပွဲမစတင်မီ အချိန် အနည်းဆုံး 15 မိနစ်ခန့် ကြိုတင် ခေါ်ဆိုရမည်။ နောက်ကျမှ ဝင်လာသည့် ခေါ်ဆိုမှုများကို လက်ခံမည် မဟုတ်သလို ပါဝင်ပြောဆိုခွင့်လည်း ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
စကားပြောဆိုမည့် အလှည့်မရောက်ခင်အထိ ပါဝင်ပြောဆိုသူများကို အစဥ်လိုက်နေရာချထားပေးမည်ဖြစ်သည်။
စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုများကို စပိန်ဘာသာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အခြား ဘာသာစကားများဖြင့် စကားပြန်ကို လိုအပ်ပါက သင်တက်ရောက်လိုသည့် တွေ့ဆုံပွဲမတိုင်မီ ငါးရက်ထက်နောက်မကျစေဘဲ 3-1-1 ကို ခေါ်ဆိုပါ။
လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် သင်မျှဝေလိုသည့် လက်ကမ်းစာစောင်များ သို့မဟုတ် အခြား အချက်အလက်များကို WinterStormTaskForce@austintexas.gov သို့ တွေ့ဆုံပွဲ မပြုလုပ်မီ တစ်ရက်၏ မွန်းတည့်ချိန်တွင် အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းအထူးအဖွဲ့သို့ တွေ့ဆုံပွဲမတိုင်မီ ကြိုတင် ပံ့ပိုးသွားမည်။